Ubuntu 12.10 ကို Install လုပ်ပြီးလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း Linux မှ
Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
Ubuntu ကို 12.10 Quantal Quetzal ရက်အနည်းငယ်အကြာအလင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒီရေပန်းစားတဲ့ distro တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုသကဲ့သို့ဒီမှာအချို့ရှိသည် မင်းလုပ်သင့်တဲ့အရာ တစ် ဦး လုပ်ပြီးနောက် တပ်ဆင် ခြစ်ရာကနေ
Ubuntu 12.10 ကိုဖြန့်ချိပြီးနောက် Canonical မှဖြန့်ဝေသော ISO ပုံသဏ္withာန်နှင့်ပါသောမတူကွဲပြားသော package အသစ်များပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။
အချို့သော ATI ဂရပ်ဖစ်ကဒ်များသည် ATI "legacy" drivers များကို အသုံးပြု၍ X server ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း မှလွဲ၍ Ubuntu 12.10 နှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ လိုအပ်ပါက Ubuntu သည်အဘယ်ကြောင့်စနစ်တကျ boot မတက်သည်ကိုသင်လျင်မြန်စွာရှာဖွေလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်အောက်ပါ Command များကိုအသုံးပြုပါ။
ငါကအကြံမပြုသော်လည်း၊ သင်၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အတွက်ဒရိုင်ဘာများကိုတပ်ဆင်ရန် Hardware Configuration Tool ကို သုံး၍ ၎င်းကိုဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဖန်တီးထားသော PPA မှတဆင့်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
သတိပြုပါ။ အသုံးပြုသူအချို့မှသတင်းပို့သည် အမှား ၎င်းသည် nVidia drivers များကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် Unity ကိုအသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင့်ရဲ့အန္တရာယ်နဲ့မွမ်းမံပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူအချို့တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဤအမှားမှရှောင်ရှားရန်သင် linux-headers-generic package ကိုသာ ဦး စွာ install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းသည်တရားဝင်မူပိုင်ခွင့်၊ လိုင်စင်သို့မဟုတ်မူပိုင်ခွင့်ကန့်သတ်မှုများကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက် Ubuntu ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင်မပါ ၀ င်သော software package များ၏သိုလှောင်ရုံဖြစ်သည်။ Google-Earth, Opera, Win32codecs, Msfonts ကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များပါ ၀ င်သည်။
sudo -E wget --output-document = / etc / apt / sources.list.d / medibuntu.list http://www.medibuntu.org/sources.list.d/$(lsb_release -cs) .list && sudo apt-get --quiet update နှင့်& sudo apt-get --yes --quiet - ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြု medibuntu-keyring && sudo apt-get --quiet update
Ubuntu Software Center တွင် Medibuntu package များကိုထည့်ရန်
sudo apt-get app-install-data-medibuntu apport-hooks-medibuntu ကိုသွင်းပါ
sudo add-apt-repository "deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu quantal main" sudo apt-get update sudo apt-get install mate-archive-keyring sudo apt-get update sudo apt-get mate-core mate-desktop-environment ကို install လုပ်ပါ
quicklists စာရင်းအပြည့်အစုံနှင့်၎င်းတို့၏တပ်ဆင်မှုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ကိုရရှိနိုင်ပါသည် Ubuntu ကိုမေးပါ.
Ubuntu 12.10 တွင်ဘာအသစ်များနှင့် Launcher ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်လျှောက်လွှာများကိုစတင်ရန် (Unity ကိုတစ်ခါမှမသုံးဖူးသူများအတွက်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်)၊ လျှောက်လွှာများ၊ ဖိုင်များ၊ တေးဂီတများနှင့် Dash နှင့် ပိုမို၍ မည်သည့်အချက်အလက်များကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများနှင့်ရှည်လျားသော etceter ကို menu bar တွင်အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲပါ၊ session ကိုမည်သို့ပိတ်မည်၊ ပိတ်မည်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမည်။
Ubuntu 12.10 desktop လမ်းညွှန်ကိုသွားပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
Ciro ရွှင်လန်းမှု ဟုသူကပြောသည်
xpenguins များကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်။ မရပါ။ ငါ ubuntu 12.10 ဆော့ဝဲစင်တာမှတဆင့် install လုပ်ပြီးသော်လည်း
Linez Linux ဟုသူကပြောသည်
nvidia driver နှင့်ပတ်သက်သောပြproblemနာမှာ၎င်းတို့သည် linux-headers-generic package ကိုမှီခိုမှုများတွင်ထည့်သွင်းမထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်
Linez Linux ကိုစာပြန်ပါ
သင်ရုံ Libreoffice သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီနူးကိုထောက်ပံ့ထားပြီးဖြစ်သည်။
ubuntu12 မှာ youtube နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြproblemနာတစ်ခုရှိတယ်။ ငါအရင် player ကိုရပြီ။ ငါဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။
Gaius baltar ဟုသူကပြောသည်
HTML5 အစား flash version ကိုသင်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ သင့် Youtube profile ၏ရွေးချယ်မှုများကိုသင်ရှာပြီးပြီလား။
Gaius Baltar သို့ပြန်သွားပါ
ငါ Ubuntu 12.10 ကိုပဲ install လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ပြသနာတစ်ခုရှိနေတယ်။ ငါ Ubuntu software center ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပုံကို deconfigured ဖြစ်ပြီဆိုရင်၊ အရာအားလုံးလှုပ်ပြီးအရောင်တွေထွက်လာတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာအဲ့တာတွေဖြစ်လာရင်ငါ reset လုပ်ရမယ်။ ယာဉ်မောင်းပြproblemနာလား
ငါ Arch Linux (သို့) Archbang ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကသုံးခဲ့တာ (ပုံမှန်အားဖြင့် Openbox ပါတဲ့ derivative distro) ။
အခြေခံအားဖြင့် Ubuntu အကြောင်းကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။
၁။ အခြား distros များ (ဥပမာ - Linux Linux နှင့် derivatives) ထက်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။
၂) အချို့သောအရာများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် (ပြုပြင်ရန်အချိန်ပိုလိုသော်လည်း) ... အရာအားလုံးသည်အလွန်အလိုအလျောက် (Ubuntu ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်း) မဟုတ်ပါ။
(၃) Ubuntu သည်အလွန်ဆွဲတင်ပြီးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်။
၄။ ၆ လတစ်ကြိမ်မင်းပြန်လည်တပ်ဆင်ရမည်။
Arch နဲ့အတူငါအဲဒီအတားအဆီးတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ "ရှားပါး" သော packages များတပ်ဆင်ခြင်းသည်မည်သည့် PPAs ကိုမှရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါ။ AUR ကိုသာသုံးပါ။ သမ္မာတရားသည်ဘုန်းအသရေဖြစ်၏။ ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် configure လုပ်ရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲနိုင်သည်ဟု ၀ န်ခံသော်လည်း၎င်းသည်အံ့မခန်းဖွယ်ဖြစ်သည်။
Ubuntu ပျောက်နေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအချက်ကတော့ Microsoft Office ပဲ။ ၂၀၁၃ မတိုင်ခင်ငါအသက်မရှင်နိုင်ဘူး။
Dennis Junior သို့ပြန်သွားပါ
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောပျော်ရွှင်ဖွယ်ပြတင်းပေါက်များဖြင့်နှစ်အတော်ကြာပြီးနောက် Ubuntu ၌ကျွန်ုပ်သည်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေသော်လည်းရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာသော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သော်လည်းမည်သည့်နေရာ၌မသိသည်ကိုမသိသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်နေရာတစ်နေရာသို့မဟုတ်သင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်အားအကြံပြုလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တပ်ဆင်သောပရိုဂရမ်များသွားနေပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ငါ post ကို taringa မှဖြတ်သန်း ubuntu အတွက် desktop နှင့်အတူပြaနာရှိသည်။
မိတ်ဆက်ကိုပြောင်းပါ။ Ubuntu 12.04 ပြောထားသည်
အိုး! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! တညျ့ 🙂
Luis Guillermo ဟုသူကပြောသည်
မေးခွန်းတစ်ခု! W7 မှာမလုပ်နိုင်တာ Ubuntu မှာဘာလုပ်လို့ရလဲ။ ငါ Ubuntu မှာလူသစ်ဖြစ်တာနဲ့ပိုပြီးသိချင်လို့ပါ
Luis Guillermo ကိုပြန်ပြောပါ
ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ် Linux တွင်သင် Windows ၌လုပ်သမျှအားလုံးကိုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ နည်းနည်းရှုပ်ထွေးသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာ (၎င်းသည် Steam Linux သို့ဝင်လာသည်နှင့်အမျှပုံမှန်ပြောင်းလဲနေသော်လည်း) ဂိမ်းများဖြစ်သည်။
ပရိုဂရမ်မာ: gnu / linux ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးလေးစားမှုရှိသော်လည်း Ubuntu သည်ရှက်စရာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အခမဲ့မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ !!
ပရိုဂရမ်မာသို့ပြန်ကြားချက်: gnu / linux
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား?? ငါဗဟိုနှင့်ပြaနာရှိသည်, ငါကွန်ပျူတာကိုငါ restart အခါတိုင်းတစ် ဦး တပ်ဆင်ခပေါ်လာပုံပေါ်, ငါက start မပါဘူး, ငါပယ်ဖျက်သောအချက်မှာသော်လည်းအဆုံးသတ်မထားဘူး။ ကျွန်တော်ဖယောင်းတိုင်မလုပ်နိုင်ဘူး ပြနာကဘာမှမလုပ်မချင်းကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ခုကို install သို့မဟုတ် uninstall မလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Dropbox ကိုကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ အပြီးသတ်မှာအေးခဲသွားပြီးကြိုတင်မတိုးဘူး၊ ကျွန်ုပ်ပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ reboot ဒါငါနေဖို့။
မင်္ဂလာပါ Ubuntu 12.10 (CD မှ install လုပ်ပြီးသား) သည် USB Internet Key HUAWEI E 173. မည်သို့မှတ်မိရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
နှိုင်းယှဉ်ဇယား - မည်သည့် browser ကအများဆုံးစားသုံးသနည်း။ Rekonq, Firefox, Chrome, Chromium or Opera
SSR - ပန်းသီးအကြောင်း